In ka badan 36.000 oo Mareeykan ah ayaa aqaladoodii ama Guryahoodii iskaga cararay,waa maxay sababta ? (Daawo Muuqaal+Warbixin) - iftineducation.com
aadan21 / July 3, 2012
iftineducation.com – Gobolo ka tirsan Dalka Mareeykanka waxaa ka taagan kala carar ka dib markii uu ka dilaacay Dab & Holac wata dabeeylo qatar ah kaas oo dadka degan Colorado ku beeray cabsi fara badan ugu dambeeyntiina ku qasbay inay Guryahooda ama aqaladooda iskaga cararaan .
Dad lagu sheegay In ka badan 36.000 oo Qof ayaa naftooda ku aamini waayay nawaaxiga dabka uu ku soo socdo waxeeyna dadkaan u qaxeen deegaanada dariska la ah Colorado.
Masuulka ugu sareeya Dab-damiska Colorado Springs Mr.Richard Brown wuxuu gar gaar deg deg ah warsaday gobolada dariska la ah Colorado ka dib markii ay wax ka qaban waayeen Holacaan halista ah. Duqa ama madaxa Colorado Mr.John Hickenlooper oo la hadlayay Tv-ga CNN-ka waxa uu ku amray dadka ku harsan goobaha uu go´doomiyay Dabka inay iskaga soo baxaan maadaama uu dabka soo gaari karo iyaga oo jiifa ama aanan fileeynin .
Holacaan oo wata dabeeylo xoowli ku socda waxaa lagu guuldareeystay in la damiyo maxaa yeelay dhoor maalmood waxaa hawada sare Biyo kaga soo daadinayay Diyaarado Milatary iyo kuwo loogu tala galay ka hor taga Dabka.